मेशिन प्रक्रियामा प्लेन थ्रेड कसरी परिवर्तन गर्ने?
प्लेन थ्रेडलाई अन्तिम थ्रेड पनि भनिन्छ, र यसको दाँतको आकार आयताकार धागो जस्तै छ, तर समतल थ्रेड सामान्यतया सिलिन्डर वा डिस्कको अन्त्य अनुहारमा प्रशोधन गरिएको थ्रेड हो। पालना उपकरणको ट्र्याक्टोर्री वर्कपीसको सापेक्ष जब एक प्लेन थ्रेड मेशिन गर्दैछ ...
मोल्ड चमकाने र यसको प्रक्रियाको कार्य सिद्धान्त।
२१-०१-१० मा प्रशासक द्वारा
मोल्ड निर्माण प्रक्रियामा मोल्डको गठन गर्ने भाग प्राय: सतह पालिश गर्न आवश्यक पर्दछ। पालिसि technology टेक्नोलोजी मास्टरिंगले मोल्डको गुणस्तर र सेवा जीवन सुधार गर्न सक्छ र यसरी उत्पादको गुणस्तर सुधार गर्दछ। यो लेखले कार्य सिद्धान्त र प्रक्रिया परिचय गर्दछ ...
क्र्याksकशाफ्ट निर्माण टेक्नोलोजीको व्याख्या र विश्लेषण
क्र्यान्कशाफ्टहरू ईन्जिनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हालसालै मोटर वाहन इञ्जिनका लागि सामग्री मुख्य रूपले ड्युस्टाइल फलाम र इस्पात हुन्। ड्यस्टाइल फलामको राम्रो काटनेको प्रदर्शनको कारण, विभिन्न गर्मी उपचार र सतह सुदृढीकरण उपचार थकान शक्ति, कठोरता र ... सुधार गर्नका लागि गरिन्छ।
मेशिन केन्द्रमा मेशिन थ्रेड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग मध्ये एक हो। थ्रेड प्रोसेसिंगको प्रक्रियामा, मेशिनको गुणवत्ता र दक्षताले सीधा अंशको गुणस्तर र दक्षतालाई असर गर्दछ। तल हामी थ्रेड प्रोसेसिंग विधिहरू परिचय गर्दछौं जुन वास्तविक मामा प्रयोग गरिन्छ ...
सीएनसी लेथ प्रोसेसिंग मौलिक विशेषताहरू ग्राइन्ड गर्दै: १. ग्रिडिinding पावर बढी छ। पीसी wheel् पि high्ग workpiece सापेक्ष उच्च गति रोटेशन को लागी, सामान्यतया पा speed्ग गति 3535m / s, सामान्य उपकरणको भन्दा २० गुणा, मेसिनले उच्च धातु हटाउने दर प्राप्त गर्न सक्दछ। को विकासको साथ ...
फास्टनरोंको एंटी-जंग सतह उपचार, यो स collecting्कलन गर्न लायक छ!
फास्टनरहरू मेकानिकल उपकरणहरूमा सबै भन्दा साधारण कम्पोनेन्टहरू हुन्, र तिनीहरूको कार्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि, प्रयोग गर्दा फास्टनरोंको क्षति सबै भन्दा सामान्य घटना हो। प्रयोगको क्रममा फास्टनरोंको क्षय रोक्नको लागि, धेरै उत्पादकहरूले व्यास पछि सतह उपचार लिने छन् ...
मेकानिकल उत्पादनमा उच्च-शक्ति इस्पात कसरी काट्ने?
उच्च-शक्ति इस्पात स्टीलमा मिश्र धातु तत्वहरूको विभिन्न मात्राको साथ जोडिएको छ। तातो उपचार पछि, alloying तत्वहरूले ठोस समाधान मजबूत गर्दछ, र मेटलोग्राफिक संरचना ज्यादातर मार्टेनाइट हो। योसँग ठूलो सामर्थ्य र उच्च कठोरता छ, र यसको प्रभाव कठोरता पनि उच्च था हो ...
मशीनिंग उत्पादकता कसरी सुधार गर्ने?
श्रम उत्पादकताले एक इकाई समय प्रति एक योग्य उत्पादन उत्पादन समय वा यो एकल उत्पादको निर्माण गर्न लिने समयलाई जनाउँछ। बढ्दो उत्पादकता एक व्यापक समस्या हो। उदाहरण को लागी, उत्पाद संरचना डिजाईन सुधार्न, कुनै न कुनै निर्माणको गुणस्तर सुधार गरी ...
कसरी सीएनसी मेशिन प्रोग्रामिंगको मास्टर बन्ने
मेशिनमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि सीएनसी मेशिन प्रोग्रामि learn सिक्नको लागि उनीहरूको कार्य क्षमता सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सीएनसी मास्टर बन्नको लागि (मेटल कटि class्ग क्लास), विश्वविद्यालयको स्नातक हुन कम्तिमा years बर्ष लाग्छ। ऊसँग ईन्जिनियरको दुवै सैद्धान्तिक स्तर हुनुपर्छ
मेशिनको क्रममा बोल्टको फुटाउन रोक्न के विधिहरू छन्?
फास्टनरको रूपमा, बोल्टहरू व्यापक रूपमा पावर उपकरणहरू, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल मेसिनरी र अन्य उद्योगहरूमा प्रयोग हुन्छन्। बोल्ट दुई भागहरु मिलेर बनेको छ: टाउको र पेच। प्वालको साथ दुई भागहरू जोड्न यो नटसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। बोल्ट गैर-हटाउन योग्य छन्, तर तिनीहरू छोड्नेछन् भने ...
मेकानिकल प्रोसेसिंग प्लान्टको व्यवस्थापन प्रक्रिया कसरी सरल बनाउने?
यो एक ठूलो-स्तर समूह कम्पनी वा एक सानो मेकानिकल प्रोसेसिंग प्लान्ट हो, राम्रोसँग प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ यदि तपाईं संचालन गर्न चाहानुहुन्छ र नाफा कमाउन चाहनुहुन्छ भने। दिन-प्रतिदिन व्यवस्थापनमा, त्यहाँ मुख्यतया पाँच पक्षहरू छन्: योजना व्यवस्थापन, प्रक्रिया व्यवस्थापन, संगठन व्यवस्थापन, रणनीतिक व्यवस्थापन ...
कसरी CNC तार काट्ने प्रक्रियामा विकृति कम गर्ने?
उच्च उत्पाद गुणस्तर र शुद्धताका कारण, सीएनसी मशीनिंग व्यापक रूपमा मशीनिंग क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। सीएनसी तार काट्ने प्रक्रिया, सबैभन्दा बढी प्रसंस्कृत workpieces को अन्तिम प्रक्रिया, अक्सर workpiece विकृत जब बनाउन को लागी गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण, सम्बन्धित उपायहरू लिन आवश्यक छ ...